နားခိုရာ: ကလေးနို့မှုန့်တွေနဲ့ malamine ပြဿနာ
ညက မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်တယ်။ အခုလေးတင် ရှစ်နာရီ သတင်းမှာ malamine ပါနေတဲ့ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ထဲက နို့မှုန့်စာရင်းကို တီဗွီက ကြေငြာသွားတယ်တဲ့။ ဒီမနက်စောစော သတင်းစာ ၀ယ်ဖတ်တော့ ဈေးကွက်ထဲက နို့မှုန့်အမျိုးအစား ၁၆မျိုးကို စစ်ဆေးရာမှာ ၉မျိုးမှာ မယ်လမင်းပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ ၇မျိုးကတော့ 0kတယ်ပေါ့။ ခက်တာက ကြေငြာတဲ့ထဲမှာ မယ်လမင်းပါတဲ့ နို့မှုန့် ၉မျိုးစာရင်းပဲပါတယ်။ ok တယ်ဆိုတဲ့ နို့မှုန့် ခုနစ်မျိုးက ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။ တော်တော်ကို သောက်သုံးမကျတဲ့ သတင်းပဲ။
သားလေးက လောလောဆယ်မှာ Abbott ကထုတ်တဲ့ Similac ဆိုတဲ့ နို့မှုန့်ကို သောက်နေတာ။ မွေးကတည်းကတော့ Dumex ကထုတ်တဲ့ Marmex Gold ကို တိုက်ခဲ့တာ။ မယ်လင်းပြဿနာတွေစတော့ US Brand ဖြစ်တဲ့ Similac ကို ပြောင်းတိုက်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်ကစပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ Similac ကို ၀ယ်လို့မရတော့ဘူး။ မေးမြန်းကြည့်ရင်း supermarket တွေကနေ supplier က expire date နီးလို့ ပြန်သိမ်းသွားသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ သားလေးသောက်နေတဲ့ Similac ဗူးက expire date က 2010 မှဗျ။ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး စိတ်ပူတာနဲ့ ဆက်မတိုက်ပဲရပ်ထားတယ်။ အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနက စစ်တဲ့ ၁၆မျိုးထဲမှာ Similac နဲ့ Marmex Gold ပါလား မပါလား ဆိုတာလဲ မသိရဘူး။ ကြေငြာတဲ့ မယ်လမင်းပါတဲ့ ၉မျိုး စာရင်းမှာတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ 0kတဲ့ ကျန်တဲ့ ခုနစ်မျိုးထဲမှာ ပါလား မပါလားဆိုတာလဲ မသေချာပြန်ဘူး။
Dumex က Dumalac infant ဆိုတာထဲမှာ မယ်လမင်းပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ အမျိုးအစားကို တစ်လသား လောက်တုန်းက သားလေး တစ်ဗူးသောက်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ပိုဆိုးတယ်။ ရက်၂၀သား သူ့သမီးဦးလေးဆို အဲဒီမယ်လမင်းပါတဲ့ Dumex ကို မွေးကတည်းက တိုက်လာတာ အခုထိ သုံးဗူး ကုန်ပြီးသွားပြီတဲ့။ သူလဲ သူ့သမီးလေးကို တော်တော်စိတ်ပူနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့လင်မယားလဲ တော်တော့်ကို စိတ်ပူနေတယ်။ သားလေး ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ဘာတွေများ ဖြစ်သွားပြီလဲလို့။ အခုအထိတော့ ကလေးက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပူနေတုန်းပဲ။
လောလောဆယ်တော့ သားလေးကို သူ့အမေနို့ကိုပဲ ဆက်တိုက် တိုက်ထားရတယ်။ အမေတော့ အိပ်ရေး ပိုပျက်ပြီး ပင်ပန်းတာပေါ့။ နောက်တစ်ပတ်ဆိုလဲ ရုံးပြန်တက်ရတော့မှာဆိုတော့ နို့မှုန့်ကိစ္စက တော်တော့်ကို အရေးကြီးနေပြီ။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ရနိုင်တဲ့အထဲက အန္တရယ်ကင်းတဲ့ နို့မှုန့်အမျိုးအစား စာရင်းလေးများ သိရင် ကူညီကြပါဦးဗျာ။
Posted by little moon at 10:14 AM
မိဘတွေမှာ စိတ်ပူမယ်ဆို ပူစရာပေါ့... သက်ဆိုင်ရာက သတင်းတွေကို အတိအကျထုတ်ပြန်ပေးသင့်ပါတယ်။
I saw this link, http://www.mysinchew.com/node/16623
According to that, popular brands like Dumex and Nestle, etc are not contaminated.I think most important is, products made in china. Apart from that, the rest might have standard or so-called integrity in production.
According to Dumex Singapore website, they said they didn't use tainted milk from China-
မိဘတွေရဲ့ ပူပန်သောက ကို သူတို့တွေ နားမလည်နိုင်ကြတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့..။ ရှင်းလင်းတဲ့ လမ်းညွှန်မှုပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပါစေ..